Mayelana nemikhuba ye-Buddha
Ama-buddhatrends adalwe eMontreal, eCanada ukunikeza abesifazane emhlabeni jikelele, ithuba lokubukeka elihlukile esixukwini futhi baziveza ngendlela yangempela ngendlela yokuqala abagqoka ngayo.
Le nkampani ikholelwa ukuthi abesifazane kufaneleka ukugqoka noma yisiphi isitayela semfashini ababonayo futhi bayifinyelele ngokushesha kwi-intanethi.
Ama-Buddhatrends nawoi-stop-shop-for yonke imimoya yamahhala ngaphandle lapho:Abaculi, Abahambi, AbaBohemi, amaHippies, nabo bonke abesifazanengubani ayifuni luthokodwa kuya babonise izithamela zabo ezinhle ngokusebenzisa isitayela sabo esiyingqayizivele.Umphefumulo okhululekile kithi ufisa inkululeko kukho konke esikwenzayo, ikakhulukazi indlela esiziphethe ngayo. Iyiphi enye enye indlela engcono yokuveza ubuntu bakho beqiniso kunendlela ogqoka ngayo nendlela obukeka ngayo. Ama-buddhatrends akuyona nje isitolo se-Wanderers kodwa umhlahlandlela wendlela yokuphila yabesifazane abakhanyisiwe banamuhla abakwazi ukwenza isitatimende abafuna ngempela.
E-Buddhatrends, sikholelwa inkululeko yakho yokukhetha isitayela sakho, futhi siyazisa isikhathi sakho, induduzo futhi Yebo, kubukeka. Ngakho-ke, sibheka umhlaba ukuze sithole imikhiqizo engcono kakhulu yokwengeza emaqoqweni ethu kuwe, izinto ezibandakanya imimoya yamahhala. Siphatha kuphela lezo mikhiqizo ezisithakazelisayo ngokusuka kwazo, ukuxhasana, okuyingqayizivele, nenduduzo. Amaqoqo ethu ahlose ukukhulisa izitayela ozikhethayo, kodwa awusoze wathola noma yini ehambisana nemfashini e-Buddhatrends ngoba sikholelwa ekutheni uhlukile, ukuthi ufanelwe inkululeko yokuzikhethela futhi kungukuthi ukudala ukubukeka okufanelana nobuntu bakho!
Ngaphandle kokukusiza ubheke okuhle kwakho kwisitayela sakho esiyingqayizivele, silwela ukwenza konke ukuthengwa nakho okuhle. Kuyinto yethu yokuqala okumele sikunike yona isevisi yamakhasimende enhle kakhulu, ukucubungula okusheshayo okuhlelekile, izikhathi zokuthumela ezifanele, kanye nenqubomgomo yokubuya engabonakali.
Siyazisa impendulo yakho, kungakhathaliseki ukuthi esekelayo noma eyakhayo futhi isebenza ngokuqhubekayo ukuze kuthuthukiswe isipiliyoni sakho sokuthenga nathi.